Ciidamada booliska Soomaaliya oo howlgal ku dilay labo nin oo lagu eedeeyay burcadnimo - Halbeeg News
Ciidamada booliska Soomaaliya oo howlgal ku dilay labo nin oo lagu eedeeyay burcadnimo
MUQDISHO(HALBEEG)- Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa howlgal ay ka fuliyeen isgoyska Buur Cali Janaale oo kala qeybiya degmooyinka dharkenley iyo Kaxda ee gobolka Banaadir ku dilay labo nin oo lagu eedeeyay inay ahayeen burcad islamarkana dhac u geysan jiray dadka shacabka ah.
Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdulahi (Tuulax), xubno ka tirsan maamulka degmooyinka Kaxda iyo dharkenley iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa kormeeray goobta lagu dilay labadan nin.
Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in labadan nin ee la toogtay ay ahayeen burcad dhac u geysata dadka shacabka.
Sidoo kale afhayeenka ciidamada booliska ayaa tilmaamay in howlgalkan lagu qabtay sideed kale oo burcad ah.
“Howlgalkan ciidamada booliska waxay ka fuliyeen inta u dhaxeysa isgoyska, Buur Cali Janaale ee kala qeybiya degmooyinka Kaxda iyo dharkenley, howlgalkaasi waxaa lagu dilay 2 ka mid ah burcadda, sideed kalana waa lagu qabtay’’ayuu yiri afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya.
Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdulahi Maxamed ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir uusan u dulqaadan doonin cid kasta oo caqabad ku ah amniga caasimadda Muqdisho.
“Maamulka gobolka Banaadir uma dulqaadan doono, cid kasta oo caqabad ku ah amniga caasimadda, waan u mahad celinaya ciidamada ka howlgalka fuliyay islamarkana ka hortagay dhibaatada shacabka lagu hayay”ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee amniga iyo siyaasadda.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidan oo kale horey dil ugu geystay dhalinyaro lagu eedeeyay inay dhac u geysanayeen shacabka Soomaaliyeed.
Gaadiidleyda Kenya oo shidaal raqiis ah kasoo iibsanaya Soomaaliya
Wasiirka gaashandhigga Soomaaliya oo kormeer ku tagay warshaddii tolmada dharka ciidanka xoogga dalka